आफ्नो प्यास शान्त र शरीरलाई हाइड्रेट राख्नका लागि मानिसहरु विभिनन प्रकारका पेय पदार्थ पिउन रुचाउँछन् तर तपाईंले कहिल्यै मानिसले आफ्नै पिसाब पिएको देख्नुभएको छ ? ५३ वर्षकी एक महिलाले उनलाई आफ्नो पिसाब पिउने बानी परेको र यसको स्वाद उनलाई कुनै स्याम्पेनजस्तो लाग्ने बताएकी छिन्
सोमवार, मंसिर ६, २०७८ ३:४७
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। आफ्नो प्यास शान्त र शरीरलाई हाइड्रेट राख्नका लागि मानिसहरु विभिनन प्रकारका पेय पदार्थ पिउन रुचाउँछन् तर तपाईंले कहिल्यै मानिसले आफ्नै पिसाब पिएको देख्नुभएको छ ? ५३ वर्षकी एक महिलाले उनलाई आफ्नो पिसाब पिउने बानी परेको र यसको स्वाद उनलाई कुनै स्याम्पेनजस्तो लाग्ने बताएकी छिन् ।
महिलाले पछिल्लो चार वर्षदेखि यस्तो गरिरहेकी छिन र उनलाई पानी पिउनुभन्दा पिसाब पिउन सजिलो लाग्ने बताएकी छिन् । द सनका अनुसार​क्यारी नामकी यी महिला कोलोराडोमा बस्छिन् । महिलाको दाबी अनुसार उनी दिनमा करिब पाँच गिलास आफ्नै पिसाब पिउँछिन् र उनी पछिल्लो चार वर्षदेखि यस्तो गरिरहेकी छिन् । यो हिसाबले हेर्ने हो भने महिलाको शरीरमा अहिलेसम्म करिब ३,४०६ लिटर पिसाब गइसकेको छ । टीएलसीको ‘माई स्ट्रेन्ज एक्डिक्सन’ मा महिलाले उनलाई मनतातो पिसाब पिउन मन पर्ने बताइन् र यसले उनलाई शान्ति प्रदान गर्ने बताएकी छिन् ।
क्यारीका अनुसार उनी नुहाउने बेला उनको बासी पिसाबले एक उत्कृष्ट लोसनको रुपमा काम गर्छ । यद्यपि, क्यारीकी छोरी केसी आफ्नी आमाको स्वास्थ्यको विषयमा अत्यधिक चिन्तित छिन् । केसी भन्छिन्, ‘के यस्तो गर्नु साँच्चै नै मेरी आमाको स्वास्थ्यका लागि राम्रो छ ? मलाई यो कुराले असाध्यै चिन्तामा पार्ने गर्छ ।’
आफ्नी छोरीको कुरा सुनेर क्यारी डाक्टरलाई भेट्न सहमत पनि भइन् । उनले क्यारीको कम्मरमा भएको एउटा कोठीको विषयमा पनि आफ्नो चिन्त व्यक्त गरिन् । त्यसपछि डाक्टरले उनलाई तुरुन्त बायोप्सी गराउन सुझाए । तर क्यारीले पारम्परिक चिकित्सा पद्धतिलाई त्याग्न अस्वीकार गरिन् । क्यारीका अनुसार यो विषयमा उनले जति पनि अध्ययन गरिन्, त्यसअनुसार यदि उनले पिसाब थेरेपी त्यागेको खण्डमा उनको मृत्यु हुनेछ ।